Otu esi etinye ihe nchọgharị Microsoft Edge na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Enwere ike Linux
Otu esi etinye ihe nchọgharị Microsoft Edge na Ubuntu 20.04
October 31, 2021 Nwere ike 21, 2021 by Jọshụa James
Melite Sistemụ Ọrụ
Wụnye ngwugwu achọrọ
Bubata igodo GPG na ebe nchekwa
Bubata igodo Microsoft Edge GPG
Bubata Microsoft Edge Repo
Wụnye Microsoft Edge Browser
Otu esi ebido Microsoft Edge Browser
Otu esi emelite ihe nchọgharị Microsoft Edge
Otu esi ewepu (wepụ) ihe nchọgharị Microsoft Edge
Okwu na mmechi
Ubuntu ndị ọrụ ugbu a, na ndabara, bụ naanị na ndị Ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ nke na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ ma e jiri ya tụnyere naanị ịgbanwe gaa na. Google Chrome.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Microsoft Edge na Ubuntu 20.04.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 LTS
Akaụntụ onye ọrụ: Akaụntụ onye ọrụ nwere sudo or mgbọrọgwụ ohere.
Melite gi Ubuntu Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Nkuzi a ga-eji ya sudo iwu na na-eche na ị nwere ọnọdụ sudo.
Iji nyochaa ọkwa sudo na akaụntụ gị:
Ihe atụ na-egosi ọkwa sudo:
[joshua@ubuntu ~]$ sudo whoami
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na na-agbakwunye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Iji mgbọrọgwụ akaụntụ, jiri iwu na-esonụ na paswọọdụ mgbọrọgwụ banye.
Iji wụnye ihe nchọgharị Edge nke ọma, ị ga-achọ ịwụnye ngwugwu ndị a; gbaa iwu a ma ọ bụrụ na ị maghị; ọ gaghị emerụ gị usoro.
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common wget -y
Ndị a bụ ezigbo ndabere nke enwere ike tinyegoro. Gbaa iwu ahụ n'agbanyeghị ma ejighị n'aka, n'ihi na ọtụtụ nrụnye ndị ọzọ ga-achọ ihe ndị a na sistemụ gị.
Na nzọụkwụ mbụ, ị ga-mkpa ibudata igodo GPG iji nyochaa izi ezi nke ngwugwu ahụ.
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
Ọzọ, tinye repo dị ka ndị a:
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
sudo rm microsoft.gpg
Ugbu a i mechaala mbubata, megharịa ndepụta nchekwa gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ.
Enwere ike itinye Microsoft Edge ugbu a site na iji iwu dabara dị ka n'okpuru.
sudo apt install microsoft-edge
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye ụdị Microsoft Edge Developer (Beta):
sudo apt install microsoft-edge-dev
Ihe atụ mmepụta:
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na nwụnye.
Ugbu a, microsoft-ọnụ or microsoft-eti-dev bụ otu version n'ihi na ọ dịghị ike version wepụtara.
Kwado ụdị ahụ wee wuo ụdị Microsoft Edge arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị site na iji iwu a:
Microsoft Edge 96.0.1032.0 dev
Iji mee Microsoft Edge, ị nwere ike iji iwu ọnụ na njikwa gị:
Nhọrọ, gbaa ọsọ iwu Microsoft- Edge n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na nke gị Ubuntu usoro iji meghee ụzọ: Ihe omume > Gosi ngwa Microsoft Edge (dev). Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu ngwa.
The oge mbụ imepee Microsoft Edge, ndị a ga-ekele gị:
Wepụ ma ọ bụ hapụ njikwa nkwalite Microsoft, wee pịa ya OK bọtịnụ ịnọgide.
Emechaa, ị ga-ahụ nhọrọ atọ mkpali, Ozi ma ọ bụ lekwasịrị anya. Ịhọrọ taabụ ọ bụla ga-elele ihe nlele ga-adị na ndabere ihe nchọgharị Edge gị.
Họrọ otu ụdị, wee pịa ya bọtịnụ nkwenye.
N'ikpeazụ, nbanye na mmekọrịta nhọrọ n'ofe ngwaọrụ dị iche iche. Ọ gwụla ma ịchọrọ nke a, pịa Gaa n'ihu na-abanyeghị, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ ga-eme site na ịpị X n'akụkụ aka nri elu nke ihuenyo mmapụta.
Ugbu a ị ga-ahụ ihe nchọgharị Internetntanetị Microsoft Edge n'ikpeazụ dị ka n'okpuru:
Ka imelite ihe nchọgharị Internetntanetị Microsoft Edge, mee ya APT melite iwu na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Ọ bụrụ otu dị, jiri nhọrọ nkwalite:
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike kwalite ngwugwu Edge n'onwe ya.
sudo apt upgrade microsoft-edge
Iji wepu Edge na Ubuntu, mebie iwu njedebe ndị a:
sudo apt autoremove microsoft-edge --purge
Maka ndị ọrụ nwere ụdị onye nrụpụta:
sudo apt autoremove microsoft-edge-dev --purge
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na iwepụ.
Rịba ama, a ga-ewepụkwa ndabere na-ejighị ya.
N'ikpeazụ, ị ga-achọ iwepụ ya igodo GPG nke e bubatara. Iji mee nke a, jiri iwu na-esonụ.
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/microsoft.*
Ma nke ahụ bụ ya, ị wepụrụ ihe nchọgharị Microsoft Edge nke ọma na sistemụ Ubuntu 20.04 gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi ebubata ngwugwu ọnụọgụ abụọ APT yana igodo GPG iji wụnye Microsoft Edge. N'ozuzu, na Edge Beta anọwo na mmepe ihe karịrị otu afọ na kwesịrị ịhụ a kwụsiri ike version ewepụtara n'akụkụ a dev ga-eme n'ọdịnihu nso n'ọdịnihu. Microsoft na-edobe beta ka ọ dị ọhụrụ ma yie ka ọ na-elekwasị anya na nchekwa na mmepe ya, ya mere ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na Google Chrome ma ọ bụ Firefox.
Categories Ubuntu Tags Microsoft Edge Nchọgharị, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Plex Media Server na Ubuntu 20.04
Otu esi edozi & hazie nkwalite na-adịghị ele anya na Ubuntu 20.04
Ahapụ a Comment kagbuo zara
Chekwaa aha m, email, na webusaiti n’ime ihe nchọgharị a maka oge ozo m ga ekwu.
Gwa m site na ozi-e ma ọ bụrụ na onye ọ bụla zara okwu m.
Ekwenyere m na LinuxCapable ịnakọta na chekwaa data m nyefere n'ụdị a. (Amụma nzuzo) *
I nwere ike na-amasị
Nkwupụta amụma nzuzo
© 2021 Linux Ikike niile echekwabara.
Akara niile, ụghalaahịa na ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere bụ nke ndị nwe ha.
Weebụsaịtị a bụ naanị maka ebumnuche nkuzi. Enweghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ ka enyere maka ọnwụ data ma ọ bụ ngwaike ọ bụla.